KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dagaal ka socda Duleedka Jowhar iyo Xaalada Magaalada oo kacsan // Warbixin
Friday 7 December 2012 15:08
Dagaal ka socda Duleedka Jowhar iyo Xaalada Magaalada oo kacsan // Warbixin
Jowhar (KON) - Ciidamda Dowlada iyo kuwa Amisom ayaa goordhaw weerar xoogan ku qaadeen Magaalada Jowhar ee e Xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
Waxaa haatan ka socda Duleedka Magaalda Jowhar Dagaal xoog badan oo sida Wararka sheegayaan khasaare badan ka dhashay, labada dhinac ba.
Magaalada gudaheeda ayaa waxaa laga dareemayaa Cabsi waxaana jira Dadkii ugu horeeyay oo ka Qaxay Magaalada.
Idaacada Kooxda Shabaab ee Andalus oo fadhigeedu ahaa Jowhar kadib markii Kismaayo lagala wareegay Al-Shabaab ayaa Hawada ka baxday.
Wariyaha KEYDMEDIA ONLINE oo haatan ku sugan Jowhar ayaa ka sheegay iney maqleen in Dad badan laga Afduubtay Magaalada.
Wixii kusoo kordha Xaalada Jowhar kala soco Keydmedia.net